Kedu kpọmkwem ihe ngwaike China chọrọ?
site ha na 20-08-22
Anyi aghaghi ima onye China Brand Brand Alliance bu, udiri mmepe ahia anyi choro, na udiri uwa anyi kwesiri ike. Ọ bụ oge dị mma na oge jọgburu onwe ya. Ọtụtụ n'ime anyị ụlọ ọrụ mmepụta ihe ka na-agbalị iji ọnụ ala oru iji nweta ihu ọma nke mba na-azụ ahịa, ma uru nke lab ...
Effectivezọ dị irè iji melite ogo nke ọla anwụ na China
Ngwongwo ígwè nke ígwè bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa maka ịmepụta ebu. N'okpuru nkwalite nke ebu ụlọ ọrụ, ụwa ebu ebu ígwè ụlọ ọrụ amalite ngwa ngwa, ma àgwà nke China ebu ígwè ike izute chọrọ nke ígwè, otú China si ebu ígwè ụlọ ọrụ ga-impro ...
China ejirila nwayọọ nwayọọ bụrụ mba nhazi ike na mbupụ ngwa ngwa ụwa
China ngwaike ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya, e mepụtara nwayọọ nwayọọ site omenala ngwaike n'okporo ámá n'ime oge a na ngwaike electromechanical obodo. Mgbe ọtụtụ mgbanwe miri emi, ahịa ngwaike eji achọ mma ugbu a ewetala ọtụtụ usoro mmepe. Nke mbụ bụ ọ̀tụ̀tụ̀. China̵ ...
<< < 1 2 3 4 5 Osote >> Peeji / 5